DHAMMA GARDEN CENTRE: September 2010
ပိဋကတ်ဆိုတာကို နားလည်ကြည့်ခြင်း (၁၁)
ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်က နိဗ္ဗာန်ပါ။
ပြောနေကြပေမဲ့ ကြားနေရပေမဲ့ ဂဃနဏ သိတဲ့သူ ရှားတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်များဖြစ်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေတောင်
“အရှင်ဘုရား၊ အရှင်ဘုရားတို့ ပြောပြောနေတဲ့ ဟောဟောနေတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဘာပါလဲဘုရား” လို့ သွားမေးကြည့်။
အင်း၊ အဲ ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေ အကြိမ်များစွာ ကြားရမှာဖြစ်ပြီး
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ နိနဲ့ ၀ါန ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပုဒ်ဖြစ်တယ် စသဖြင့်
အငယ်တုန်းက ဆရာဘုန်းကြီးက ကျက်ခိုင်းလို့ ရထားတဲ့ဟာတွေကို
ရွတ်ပြ ဆိုပြ ပါလိမ့်မယ်။ တချို့ဘုန်းကြီးတွေဆို
ငယ်ငယ်တုန်းက စနစ်တကျ မသင့်ခဲ့ရလို့ ဒါကိုတောင်
ကျကျနန မရွတ်ပြ မဆိုပြနိုင်ပါဘူး။
ဒါ့အပြင် နိဗ္ဗာန်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှင်းပြတဲ့အခါ စကားလုံး တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး
တစ်ထွာလောက်ဝေးပြီး စကားလုံးတစ်လုံး ထွက်လာဘို့
ဒီပ၊ အလင်းရောင် စသဖြင့် ပရိယာယ်စကားလုံး (၄၀) ကျော် ထုတ်ပြသွားပါတယ်။
ဒါကလဲ နိဗ္ဗာန်ကို နားလည်ဘို့အတွက် အဘိဓာန်ဆရာကြီးရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုပါပဲ။
အလွန်တရာ မြင့်မြတ်တာ၊ အစဉ်ထာဝရတည်မြဲတာ၊ ဖျက်ဆီးလို့ မရတာ၊
မြေ၊ ရေ၊ လေ၊ မီး ဆိုတဲ့ ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာ မဟုတ်တာ။
ဆင်းရဲမှုကို ကျော်လွန်တာ၊ အဖြစ်အပျက် မရှိတာတွေဟာ နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီး
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ
ရှင်းမသွားတဲ့အပြင် ပိုတောင် ရှုတ်ထွေးသွားပါသေးတယ်။
ဒါကလဲ ရှုတ်ထွေးသင့်လို့ ရှုတ်ထွေးတာပါ။
နိဗ္ဗာန်အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြတဲ့သူကလည်း ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်၊
ရှင်းပြတာကို နာယူ၊ လေ့လာ၊ နားထောင်တဲ့သူကလည်း ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့
ရိုးရိုးပုဂ္ဂိုလ်တို့အရာမဟုတ်တဲ့ နိဗ္ဗာန် ဆိုတာကို
ဘယ်လိုမှ အပြည့်အ၀ နားလည်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခန့်မှန်းသိလောက်နဲ့ပဲ နိဗ္ဗာန်ကို နားလည်ကျမှာပါ။
လူတွေဟာ ဝေါဟာရပညတ်တစ်ခုကို အဓိပ္ပါယ်ဖော်ဆောင်ရာမှာ
သူတို့စိတ်အသိနဲ့ အဓိပ္ပါယ် မဖောင်ဆောင်နိုင်ကြပါဘူး။
နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးကိုလည်း သူတို့မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်လို့ အဓိပ္ပါယ်မဖော်ဆောင်နိုင်ကြဘူး။
ခန့်မှန်းယော်ရမ်းပြီး နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ ဒီလိုကွ၊ ဟိုလိုကွ နဲ့ ပြောဆိုနေကြတာ။
မဟာတန်း ပထမနှစ်တုန်းက သင်ခဲ့ရတဲ့ ဒေါက်တာရာဟုလာရေးခဲ့တဲ့
ဆိုတဲ့ စာအုပ်ခလေးတောင် သတိရမိသေး။
ငါးသတ္တ၀ါတွင် ကုန်းမြေအကြောင်းဖော်ပြရန် ဝေါဟာရမရှိသကဲ့သို့
လူတို့တွင်လည်း လောကုတ္တရာအတွေ့အကြုံကို ဖော်ပြနိုင်ရန် စကားလုံးမရှိချေ။
လိပ်က ၄င်း၏မိတ်ဆွေ ငါးအား
ကုန်းပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်၍ ရေကန်သို့ ပြန်လာကြောင်း ပြောပြသည်။
အော်၊ ဟုတ်လား၊ ရေကူးလာခဲ့တာမဟုတ်လား ဟု ပြန်မေးလေသည်။
ကုန်းပေါ်တွင် ရေမကူးနိုင်ကြောင်း၊ ကုန်းမြေသည် မာကြောကြောင်း၊
လမ်းလျှောက်၍ သွားရကြောင်း ရှင်းပြသည်။
သို့ရာတွင် ငါးက လိပ်ပြောသော ကုန်းမြေကဲ့သို့ မရှိနိုင်ကြောင်း၊
ရေကန်ကဲ့သို့ပင် လှိုင်းအိကလေးများနှင့် ရေပြင်သာဖြစ်ရမည်ဖြစ်၍
ရေငုတ်နိုင်၊ ရေကူးနိုင်မည်သာဖြစ်ကြောင်း ဇွတ်ငြင်းဆိုလေတော့သည်။
Just as the fish had no words in his vocabulary to express the nature of the solid land.
The tortoise told his friend the fish
that he (the tortoise) just returned to the lake afterawalk on the land.
‘Of course’ the fish said, ‘You mean swimming.’
The tortoise tried to explain that one couldn’t swim on the land,
that it was solid, and that one walked on it.
But the fish insisted that there could be nothing like it,
that it must be liquid like his lake, with waves,
and that one must be able to dive and swim there.
ဟုတ်တယ်။ ရိုးရိုးလူသား (လောကီလူသား) တို့ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကို သေချာ မသိနိုင်။
မျက်မှောက်သိဖြင့် နိဗ္ဗာန်ကို မသိနိုင်။
တရားကျင့်ပြီး သောတာပန်၊ သကဒါဂါမ်၊ အနာဂါမ်၊ ရဟန္တာ ဆိုတဲ့
နိဗ္ဗာန်သဘောသဘာဝကို သေသေချာချာ အတွင်းသိ အစင်း (အဆင်း) သိ
(၀ါ) မျက်မှောက်သိ သိနိုင်မယ်။
ဆိုတော့ နိဗ္ဗာန်ကို ဂဃနဏ သိဘို့ သောတာပန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။
သာသနာတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဘို့၊ ဘိက္ခုနီ (ရဟန်းမ) အဖြစ်လက်ခံဘို့
ဖြစ်နိုင်ပါတယ် အာနန္ဒာ လို့ မြတ်စွာဘုရားက ပြောတော့
မိန်းမသားတွေကို သာသနာ့ဘောင်တွင်း ၀င်ဘို့ ခွင့်ပြုသင့်တာပေါ့။
နောက်ပြီး မဟာပဇာပတိဂေါတမီဆိုတာလည်း တခြားလူမှ မဟုတ်တာ၊
မိရင်းပမာ နို့တိုက်မွေးမြူ စောင့်ရှောက်လာခဲ့သူပဲ။
ဘိက္ခူနီ (ရဟန်းမ) ပြုခွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 9:54 AM
(အောက်ပါအကြောင်းအရာများဟာ မွတ်စလင်တစ်ဦးက မေးလို့ သူနားလည်အောင် အရပ်သုံးစကားများသုံးပြီး ဖြေဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နားလည်ပေးပါ။)
မကောင်းသော သဘာဝတရားများကို ဟောကြားပေးခဲ့သည်။ သင်ကြားပေးခဲ့သည်။
ထိုကြောင့် မြတ်စွာဘုရားကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့က ဆရာအဖြစ်မှတ်ယူသည်။
ဆရာအဖြစ်မှတ်ယူကာ ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့် ရှိခိုးခြင်းဖြစ်သည်။
မြတ်စွာဘု၇ားကို ကြောက်၍ ရှိခိုးခြင်းမဟုတ်ပါ။
ရှိမခိုးဘဲ နေလိုက နေနိုင်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငြိမ်းချမ်းအောင် လုပ်ပေးဘို့နှင့်
ကိုယ့်ပတ်ဝတ်ကျင် စိတ်ချမ်းသာအောင် လုပ်ပေးဘို့ အရေးကြီးသည်။
နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများက အုတ်ဂူသို့သွား၍
ကျေးဇူးတင် အမှတ်ရ အောက်မေ့သည့်အနေဖြင့် အလေးပြုကြသလို
မြတ်စွာဘုရားကို ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့် ရှိခိုးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ရှိခိုးရတွင် အကြိမ်ရေ သတ်မှတ်ချက်မရှိပါ။
ရှိခိုးခြင်းထက် ကိုယ်ကျင့်သီလကို ဦးစားပေးသော ဘာသာဖြစ်သည့်အတွက်
ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းပဲ ၂၄ နာရီပတ်လုံး ရှိခိုးစေကာမူ အချည်းနှီးဖြစ်သည့်အတွက်
သို့သော် အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို ကျေးဇူးတင်သည့်အနေဖြင့် ရှိခိုးလိုက
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၆၀၀ ခန့်က ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ဘုရားရဲ့ ဂုဏ်ကို အာရုံပြုပီး (၁) ကြိမ်
သူ့ရဲ့ တရားတော်ကို အာရုံပြုပီး (၁) ကြိမ်
သူ့တရားတော်တွေကို မပျောက်အောင် ထိမ်းသိန်းစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေရဲ့ ဂုဏ်ကို အာရုံပြုပီး (၁) ကြိမ် စုစုပေါင်း တစ်ခါရှိခိုးခြင်း အမှုပြုက ဦး (၃) ကြိမ်ချရပါသည်။
ဥပုသ်စောင့်ရခြင်း၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ
မိုက်မဲတွေဝေမှု မောဟ တို့ နည်းပါးအောင် လုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင်းအာရုံ၊ အသံအာရုံ စသော ငါးဖြာအာရုံတို့အပေါ်မှာ မှီပြီး မကောင်းတဲ့ စိတ် မ၀င်မိအောင်၊ မဖြစ်ပေါ်လာအောင် ကြိုးစားခြင်းကို ဥပုသ်စောင့်ခြင်း ဟုခေါ်ပါသည်။
ဥပုသ်စောင့်ရာတွင် စည်းကမ်းချက်များမှာ ထွေထွေထူးထူးမရှိပါ။
ရှစ်ပါးဥပုသ်သီလ၊ ကိုးပါးဥပုသ်သီလ၊ ဆယ်ပါးဥပုသ်သီလစသည်ဖြင့် ရှိပါသည်။
မိမိအရွယ်နှင့် မိမိအင်အားနှင့် မိမိအချိန်နှင့်ကိုက်ညီအောင် ဥပုသ်သီလများ စောင့်ထိန်းနိုင်ပါသည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာအဓိကပွဲသဘင်များကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက ချမှတ်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ။ နောင်လာနောက်သားများက ဗုဒ္ဓဘာသာအမှတ်တရနေ့များအဖြစ်
ဥပမာ။ မေလ လပြည့်နေတွင် (Vesak Festival) ၀ိသာခါ ပွဲသဘင်ကို ကျင်းပပါသည်။
ထိုငါးပါးသီလသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အတွက် မဟုတ်ပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ဘုရားကို ကြားဘူးစရာမလိုပါ။
ငါးပါးသီလ စောင့်ထိန်းက ထိုငါးပါးသီလစောင့်ထိန်းသူသည်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သွားပေတော့သည်။ ငါးပါးသီလစောင့်ထိန်းသူ ဘယ်သူမဆို။
တရုတ်ဖြစ်ဖြစ်၊ နီဂရိုးဖြစ်ဖြစ်၊ အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဖြစ် ၊ မွတ်စလင်ဖြစ်ဖြစ်၊
ငါးပါးသီလ မစောင့်ထိန်းသူ ဘယ်သူမဆို၊
ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ် မကောင်းတဲ့ ဘုံဘ၀ ရောက်မည်။
(၁) သူတပါးအသက်မသတ်ရ။
(၃) သူတပါး သားမယား စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားရ။
(၅) အရက်၊ ဆေးခြောက်စတဲ့ မူယစ်စေတတ်တဲ့အရာဝတ္ထုမှန်သမျှ မသုံးစွဲရ။
ဗုဒ္ဓဘုရားဖြစ်ပေါ်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာ သဘာဝတရားကို သိဘို့ ကြိုးစားရင်း နောက်ဆုံးသဘာဝတရားတွေကို သိလာလို့ သိသူ (ဗုဒ္ဓ) အမည်ရလာတာ။
ဗုဒ္ဓဆိုတာ သိသူလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာတို့၏ အဓိကယုံကြည့်ချက်မှာ ကံ၊ ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရုပ်မလှတဲ့သူ၊ ရုပ်လှတဲ့သူ၊ ချမ်းသာတဲ့သူ၊ ဆင်းရဲတဲ့သူတွေ
ဘာကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေကြရတာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းအကျိုး သဘာဝကို
ဗုဒ္ဓဘာသာတွင် အကြမ်းအားဖြင့်း ဂိုဏ်းကြီး ၃ ဂိုဏ်းကွဲပြားနေသည်။
တရားတော် မူရင်းအတိုင်း လက်ခံကျင့်သုံးသည်။
ပန်းတိုင်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ ရိုးရိုးသာမန် တပည့်အဖြစ်ဖြင့် ကျင့်သုံး၍လည်း ရောက်နိုင်သည်။ ဘုရားဖြစ်အောင် ကျင့်ကြံ၍လည်း ဘုရားဖြစ်ပြီး ပန်းတိုင်ဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်သည်။
၁။ မြန်မာ၊ ၂။ ထိုင်း၊ ၃။ သီရိလင်္ကာ၊ ၄။ ကမ္ဗောဒီးယား၊ ၅။ လော-နိုင်ငံတို့မှာ
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဟူသည်မှာ မြတ်စွာဘုရား၏ တရားတော်ကို
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်း မပြုမပြင်၊ မဖြည့်မစွက်၊ မပယ်မနှုတ်ဘဲ
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကဲ့သို့ မူရင်းတရား အစစ်အမှန်တွေကိုလည်း
အတိအကျ မလိုက်နာနိုင် မဟာယာနတွေလောက်လည်း ပြုပြင်ဖြည့်စွက်ပယ်နှုတ်ဖို့
မလုပ်ချင်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဟီနယာနဗုဒ္ဓဘာသာဟု ခေါ်ဆိုသည်။
အခုအခါမှာတော့ ၎င်းဂိုဏ်းတို့သည် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာဂိုဏ်းက
မျိုထားခြင်းကို ခံလိုက်ကြရသည်ဖြစ်၍ မဟာယာနအတွင်းမှာ တိမ်မြုပ်ကြကုန်ပြီး
ပျောက်ကွယ် သလောက် ဖြစ်သွားကြပါသည်။
ယင်းဂိုဏ်းတို့အား ဟီနယာန=နိမ့်ကျသည့်ယာဉ်ဟူ၍ နာမည်တပ်မှုကို
ဘီစီ ငါးရာစုခန့်က စတင်ပေါ် ထွန်းခဲ့သည့်ဂိုဏ်းဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။
မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်း မဟုတ်ဘဲ
ကာလ၊ ဒေသ၊ ပုဂ္ဂလ အစရှိ သော အခြေအနေအရပ်ရပ်တို့နှင့် ကိုက်ညီအောင်
ဘုရားရှင်၏ တရားတော်တို့ကို ပြုပြင်ပြီး
တပည့်သာဝကအဖြစ်၊ သီးခြားဘုရား (ဘုရားဖြစ်ကာမတ္တ) ပစ္စေကအဖြစ်ဖြင့်
နိဗ္ဗာန်ကိုမရနိုင်ဘဲ သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအဖြစ်ဖြင့်သာ နိဗ္ဗာန်ကို ရနိုင်သည်ဟူ၍
ယူဆသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို မဟာယာနဗုဒ္ဓ ဘာသာဟုခေါ်ဆို သည်။
ယခု -တိဘက်၊ ဆိကင်၊ ဘူတန်၊ နီပေါ၊ မွန်ဂိုလီးယား၊ တရုတ်၊ ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ဗီယက်နမ်
အစရှိသောနိုင်ငံ - တို့မှာမဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်နေကြသည်။
မှတ်ချက်။ ထေရ၀ါဒနှင့် ဟီနယာန မတူပါ။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:07 PM
"My Sole Wish"
I breath its air
Moe Hein, (thar journalkyaw)
နောင်ဘ၀မှာတောင် မြန်မာပြည်မှာ ပြန်လည်မွေးဖွားလိုသူ
သားဂျာနယ်ကျော် (မိုးဟိန်း) ကွယ်လွန်သွားလို့ ၀မ်းနည်းမိတယ်။
တစ်နေ့တစ်နေ့နဲ့ တော်တဲ့သူတွေ ဒို့မြေပေါ်မှာ ကုန်လိုက်လာပြီ။
မတော်တဲ့သူတွေ ပြည့်လာတော့မဲ့ ဒို့မြေပေါ်မှာ
ဒကာမိုးဟိန်းကို ဒို့မြေက ကြိုဆိုနေအုံးမယ်။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 12:31 PM
First oneself, then others
Let one first establish oneself
Attanam eva pathamam
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:12 AM
ပိဋကတ်ဆိုတာကို နားလည်ကြည့်ခြင်း (၁၀)
အမျိုးသမီးတွေ သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ဘို့ ရဟန်းမ ပြုဘို့ (ဘိက္ခုနီလုပ်ဘို့)
မြတ်စွာဘုရားက သုံးကြိမ်သုံးခါ ငြင်းဆန်ခဲ့ပေမဲ့
မိထွေးတော် မဟာပဇာပတိဂေါတမီ ဇွဲမလျှော့ပါဘူး။
ယောက်ကျားတို့ဇွဲ သေခါမှ လျှော့မယ် အဆိုရှိပေမဲ့ သူကတော့
မိန်းမတို့ဇွဲ သေခါမှ လျှော့မယ်လို့ နှလုံးသွင်းထားပုံပေါက်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရား ဝေသာလီမှာ နေခိုက်
မဟာပဇာပတိဂေါတမီဟာ ရဟန်းမလုပ်ဘို့ စိတ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးအချို့ကို ခေါ်ပြီး
ဝေသာလီနဲ့ မဟာပဇာပတိဂေါတမီတို့နေတဲ့ ကပိလ၀တ္ထုက
မိုင်ပေါင်း ၁၅၀ လောက်ဝေးပါတယ်။
လေယာဉ်နဲ့သွားတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရထားနဲ့သွားတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ရှင်ဘုရင်ရဲ့ မိဖုရားဖြစ်လို့ မာစီဒီး (သို့) BMW နောက်ဆုံးပေါ်ကြီးစီးပြီး သွားတယ်လို့လည်း
လမ်းလျှောက်သွားကြတာပါ။ On foot ပါ။
ဒီလောက်ဝေးကွာတဲ့ခရီး မိန်းမသားတွေ လမ်းလျှောက်ကြရတာဆိုတော့
အ၀တ်အစားကလည်း သယ်ဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ခါးဝတ်ခါးစားပဲ ပါမှာ။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ၀င်ခံစားပြီး စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့။
မိုင် ၁၅၀ ခရီးဆိုတော့ ဘယ်နှရက်လောက် ကြာကြာ လျှောက်ခဲ့ရမယ်မသိဘူး။
လမ်းခရီးမှာ မိုးဒဏ် လေဒဏ် နေဒဏ်တွေနဲ့ဆိုတော့
သူတို့အ၀တ်အစားတွေ ညစ်ပတ်ပေရေနေမှာ သေချာတယ်။
နန်းတွင်းသူတွေဆိုတော့ လမ်းလည်း ရှည်ရှည်ဝေးဝေး လျှောက်ဖူးမယ်မထင်ဘူး။
သူတို့ ခြေဖ၀ါးလေးတွေ ပေါက်ပြဲ ဖူးယောင်ကုန်တာပေါ့။
သူတို့ ဝေသာလီပြည် မြတ်စွာဘုရားနေတဲ့ ကျောင်းရောက်တော့
သူတို့တစ်တွေကို မြင်လိုက်ရတော့ အတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာပဲ။
စာနာစိတ်၊ နားလည်စိတ်တွေ ရင်ထဲမှာ ပြည့်နေတဲ့ရှင်အာနန္ဒာ
ဒီမြင်ကွင်းကို မြင်ကွင်းအတိုင်း ချက်ချင်း မြတ်စွာဘုရားထံ သတင်းပို့တယ်။
သာသနာတွင်းဝင်ရောက်ခွင့်ပြုဘို့ ရဟန်းမအဖြစ်လက်ခံဘို့ လျှောက်တယ်။
အော်၊ မြတ်စွာဘုရားနှယ်၊ သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ချင်လွန်လို့ ရဟန်းမ ဖြစ်ချင်လွန်လို့
ဘိက္ခုနီလုပ်ချင်လွန်းလို့ အပင်ပန်းခံပြီး မိုင် ၁၅၀ ဝေးကွာတဲ့နေရာက တကူးတကလာရတာ၊ ကိုယ်ချင်းမစာတတ်လိုက်တာလို့ အပြစ်တင်မစောလိုက်ပါနဲ့။
အဲ့ခေတ် အဲ့အခါက အိန္ဒိယလူ့အဖွဲ့အစည်းမှာ အမျိုးသမီးဆိုတာ
မီးဖိုချောင်ထဲမှာပဲ နေရတဲ့သက်ရှိသတ္တ၀ါတစ်မျိုးလို့ မှတ်ယူထားကြတာ။
မီးဖိုးချောင်ထဲက ဆွဲထုတ်ပြီး သင်္ကန်းဝတ်ပေးပြီး
ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အကျိုးဆက်ကို ကြည့်ရသေးတယ်။
ဒါ ဒေသကို ကြည့်တာလို့ ဆိုရမယ်။
နောက်ပြီး ကာလ ဆိုတဲ့ အချိန်ဆိုတာကိုလည့် ထည့်တွက်ရတယ်။
ဒီ Time and Space ဆိုတဲ့ ချိန်ခွင်ညှာကို ညှိနိုင်မှသာ
မြတ်စွာဘုရားသိနေလို့သာ ရှင်အာနန္ဒာရဲ့ လျှောက်ထားတောင်းပန်ချက်တွေကို
မိန်းမတွေကို ခွဲခြားဆက်ဆံနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။
(မနုဿတ္တဘာဝ ဒုလ္လဘ) လူ့အဖြစ်ကို ရခဲတယ် လို့သာ ဟောခဲ့တာ။
ယောက်ကျားအဖြစ်ကို ရခဲတယ်၊ မိန်းမအဖြစ်ကို ရခဲတယ်လို့ မဟောခဲ့ပေါင်။
လူ့ဘ၀ရောက်လာ လူ့အဖြစ်ကို ရရှိလာမှတော့
ရခဲတဲ့ဘ၀ကို ရရှိခဲ့ကြလို့ အကုန် ကံကောင်းသူတွေချည်းပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ယောက်ကျားနဲ့ မိန်းမ မတူဘူးဆိုတာကိုတော့ လက်ခံရမှာပဲ။
အခုခေတ်အော်နေတဲ့ ယောက်ကျားမိန်းမ တန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးဆိုတာတွေလည်း
ရာနှုန်းပြည့်တော့ ဘယ်ခေတ်ကာလကိုရောက်ရောက် ရနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
တချို့အမျိုးသမီးတွေကလည်း စီးပွါးရေးရှုဒေါင့်က ကြည့်ပြီး
သူတို့လည်း ငွေရှာနိုင်တော့ သူတို့ ယောက်ကျားတွေနဲ့ ခြေရာချင်း တိုင်းချင်ကြတယ်။
ခြေရာချင်း မတူနိုင်ပါဘူး။ ယောက်ကျားခြေထောက်နဲ့ မိန်းမခြေထောက် မတူလို့ပါ။
မြန်မာစကားမှာရှိတဲ့ မောင်တစ်ထမ်း မယ်တစ်ရွက် ဆိုတာကိုက
ယောက်ကျားတွေက အိမ်ထောင်မှုဝန်ကို ပိုထမ်းနေရကြောင်း သိသာပါတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ၊ ယောက်ကျားတစ်ထမ်းနဲ့ မိန်းမ တစ်ရွက်
ဘယ်သူက ၀န်ကို ပိုထမ်းရလဲ၊ ပိုထမ်းနိုင်သလဲ။ ပိုသယ်ရသလဲ။
one may be highly educated,
very healthy or holding high office;
nonetheless it’s all in order to feed the wife and children.
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:22 AM
ပိဋကတ်ဆိုတာကို နားလည်ကြည့်ခြင်း (၉)
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ မယ်တော်က မဟာမာယာ။
မဟာမာယာ ရော၊ မဟာပဇာပတိဂေါတမီ ပါ။
ရှင်ဘုရင် သုဒ္ဓေါဒန ရဲ့ မိဖုရားတွေ။
(အခုခေတ်လူတွေ ညီအမ အရင်း ၂ ယောက်ကို ယူထားတာ အထူးအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။)
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ မယ်တော် မဟာမာယာက မြတ်စွာဘုရားကို မွေးဖွားပြီး မကြာဘူး။
မြတ်စွာဘုရားငယ်စဉ်ဘ၀ကို မဟာပဇာပတိဂေါတမီ က
မဟာပဇာပတိဂေါတမီမှာလည်း သားသမီးမရှိ မဟုတ်ဘူး။ ရှိပါတယ်။
သားက နန္ဒ၊ သမီးက သုန္ဒရီနန္ဒီ၊
နန္ဒ ဆိုတာ ဗုဒ္ဓစာပေမှာ နာမည်ကြီး။
(စာရေးဆရာကြီး ပါရဂူက ဒီနန္ဒကို
ညီတော်မင်းနန် ဆိုပြီး စာအုပ်တစ်အုပ် ရေးထုတ်ဘူးတယ်)
နန္ဒနဲ့ ဇနပဒကလျာဏီ လက်ထပ်မဲ့နေ့၊
မြတ်စွာဘုရားက နန္ဒကို ကျောင်းခေါ်သွားပြီး ရဟန်းဘောင်တက်ပေးလိုက်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားက ရဟန်းတဖြစ်လဲ ရှင်နန္ဒကို
မင့် ဇနပဒကလျာဏီနဲ့ ဒီမျောက်မ ဘယ်သူက လှသလဲ လို့
မဟာပဇာပတိဂေါတမီဆိုတာ ဒီဇာတ်လမ်းထဲက နန္ဒ ရဲ့ မိခင်ကြီးပါပဲ။
မဟာပဇာပတိဂေါတမီ ဆိုတာ နှယ်နှယ်ရရ ပုဂ္ဂိုလ် မဟုတ်ဘူး။
မြတ်စွာဘုရား ဇာတိမြေ ကပိလ၀တ္ထုကို ရောက်ခိုက်
ဖခင် ရှင်ဘုရင်သုဒ္ဓေါဒနကို တရားဟောတာကို
မဟာပဇာပတိဂေါတမီ ပါ နာကြားရင်း သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။
ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့ ရှင်ဘုရင် သုဒ္ဓေါဒနလည်း ကွယ်လွန်၊
သားတော်နန္ဒ ကလည်း သာသနာတော်တွင်းရောက်နေတော့
သာသနာတော်တွင်း ၀င်ရောက်လိုတဲ့ ဆန္ဒပြင်းပြလာတယ်။
ဘိက္ခုနီ (အမျိုးသမီးများ ရဟန်းမ ပြုလုပ်ခြင်း) အလေ့အကျင့်က အဲ့အချိန်မှာ လုံးဝမရှိသေးတော့ လွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့ မဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဒီလို စဉ်းစားတတ်တာကိုက သူ့အားသာချက်။
လုပ်ရဲဖို့ထက် လုပ်တတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။
စဉ်းစားရဲဖို့ထက် စဉ်းစားတတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးတယ်။
လုပ်တတ်ဖို့ထက် စဉ်းစားတတ်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
စဉ်းစားပြီး သူ့ကို ရဟန်းမဘ၀နဲ့ခွင့်ပြုပြီး သာသနာတွင်းမှာ နေထိုင်ခွင့်ရဘို့
သုံးကြိမ်တိုင်အောင် တောင်းဆိုတာကိုတောင် မြတ်စွာဘုရားက ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။
မယ်တော်ရင်း မဟာမာယာ ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်
သူ့ကို မယ်တော်အရင်းနဲ့မရှား ပြုစုစောင့်ရှောက်လာတဲ့
မိထွေးတော် မဟာပဇာပတ်ိဂေါတမီ က
သာသနာ့ဘောင်ဝင်လိုကြောင်း၊ ရဟန်းမ ပြုလိုကြောင်း
ခခယယ တောင်းပန်တာတောင် မရပါလား။
မိထွေးတော် မဟာပဇာပတိဂေါတမီဘက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်
သနားတတ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မြတ်စွာဘုရားကပဲ မသနားတတ်သလိုလို၊
ကရုဏာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ မြတ်စွာဘုရားကပဲ ကရုဏာ မရှိသလိုလို။
မိန်းမသားတွေကိုတော့ ရဟန်းမ ၀တ်ခွင့် မပြုထားတဲ့ မြတ်စွာဘုရား
လိင်ခွဲခြား ခွဲခြား လုပ်သလိုလို ထင်ရတယ်။
ယောက်ကျားမိန်းမ တန်းတူအခွင့်အရေး မပေးသလိုလို ထင်ရတယ်။
တကယ်တော့ ယောက်ကျား မိန်းမခွဲခြားဆက်ဆံတာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက ကျောင်းဆိုတာ အတည်တကျရှိသေးတာမဟုတ်ဘူး။
ရှိတဲ့ကျောင်းတွေကလည်း ရဟန်းတွေ နေနေကြတာ။
ရဟန်းတွေနဲ့ ရဟန်းမတွေ အတူနေလို့ကလည်း မဖြစ်ဘူးမဟုတ်လား။
ကျောင်းမရှိတဲ့ရဟန်းတော်တွေ တချို့က သစ်ပင်အောက်၊
တချို့က ၀ါးပင်အောက်မှာ နေထိုင်ရင်း တရားအားထုတ်ကြတာ။
ယောက်ကျားသား ရဟန်းတော်များကတော့ ရဟန်းဘ၀ စရောက်တာနဲ့
တရားအားထုတ်ဘို့ သစ်တစ်ပင်အောက် ၀ါးတစ်ပင်အောက်မှာ
မိန်းမသား ရဟန်းမများကတော့ ရဟန်းမ ဘ၀ စရောက်ရောက်ချင်း
တရားအားထုတ်ဘို့ သစ်တစ်ပင်အောက်မှာ ၀ါးတစ်ပင်အောက်မှာ
တစ်ကိုယ်တည်းသွားပြီး နေလို့ အဲ့အချိန်တုန်းက အဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယရဲ့
အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကြားမှာ ဖြစ်ကို မဖြစ်ပါဘူး။
( ဒီနေ့ ဒီအချိန်အခါမှာလည်း မဖြစ်သေးပါဘူး)
သိနေတယ်၊ မြတ်စွားဘုရားက ဒါကို သိနေတယ်။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 10:49 AM
အသိသည် အသိသာ ကိုယ်ကျင့်မဟုတ်။
သိတိုင်းမကျင့်လျှင် သိနေရုံဖြင့် အကျိုးမရ။
ကျမ်းစာတို့သည် သိအောင်သာ ညွှန်ပြနိုင်သည်။
ယခုကာလ စာပေလိုက်စားသူ၊ အဆုံးအမ များများခံရသူတို့သည်
သို့သော် ထိုသိသူများတွင် အထိုက်အလျောက် စောင့်စည်းသူ
ထိုကဲ့သို့ လူစားတွေ ပေါများနေသော ဤကမ္ဘာလောကကြီးဝယ်
လူကောင်း သူကောင်းများပင် စိတ်ထားကောင်းဖို့ ခဲယဉ်းလေတော့သည်။
အရှင်ဇနကာဘိဝံသ (ကိုယ်ကျင့် အဘိဓမ္မာ)
Posted by Dr. Ashin Indaka at 7:41 AM
Asasolid rock is not shaken
Posted by Dr. Ashin Indaka at 7:57 AM
ပိဋကတ်ဆိုတာကို နားလည်ကြည့်ခြင်း (၈)
မနုဿကို လူလို့ဘာသာပြန်တာက ဆင့်ပွါးအနက်အဓိပ္ပါယ်ဖြစ်တယ်။
ဒါ့ကြောင့် မနနဲ့ ဥဿ နှစ်ပုဒ်ပေါင်းထားတဲ့ မနုဿဆိုတဲ့ပါဠိပုဒ် တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ်က
တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်၊ တစ်လထက်တစ်လ၊ တစ်ရက်ထက်တစ်ရက်
မိမိရဲ့ စိတ်ကို မြင့်သထက်မြင့်အောင် မြှင့်တင်ပေးတတ်တဲ့သူဆို မနုဿ = လူလို့ခေါ်ရမှာပဲ။
စိတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးတတ်တာလဲ လူသားကပဲ စိတ်ကို မြှင့်တင်ပေးတတ်တာ။
တိရိစ္ဆာန်တွေက သူတို့စိတ်ကို အဆင့်မှီအောင် မြှင့်တင် မပေးတတ်ကြဘူး။
ခွေးဟာ သူ့စိတ်ကို လူတွေလို အဆင့်မှီအောင် မတွေးခေါ်တတ်ဘူး။ မမြှင့်တင်တတ်ဘူး။
ဒါ့ကြောင့် သူတို့ဟာ မနုဿ = လူမဟုတ်ကြဘူး။
မိမိစိတ်ကို အဆင့်အတန်းမြင့်အောင်မြှင့်တင်တတ်မှ လူဆိုရင်
အသက်ခြောက်ဆယ် သေခါနီးအထိ ဒီအတိုင်းပဲဆိုရင်
သူတို့ကို မနုဿ = လူလို့ခေါ်လို့ရပါ့မလား။
တချို့ဆို ငယ်ငယ်တုန်းကမှ တော်သေး။
အသက်ကြီးလာလေ သူတို့ရဲ့ စိတ်အဆင့်အတန်းနိမ့်ကျသွားလေလေ။
လောကကြီးမှာ ကိုယ့်အဆင့်အတန်း တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့်
မြင့်သထက်မြင့်အောင် ကြိုးစားနေကြတဲ့သူတွေ တပုံတပင်ကြီးပါပဲ။
သို့သော်လည်း လူဆိုတာ အကောင်းနဲ့အဆိုး၊ အတော်နဲ့အညံ့ ဒွန်တွဲနေတာ။
အညံ့သမားတွေက အတော်သမားတွေဖြစ်လာအောင် လုပ်ရမှာက
လူ့စာရင်းသွင်းဘို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းထဲနေထိုင်ခွင့်ပြုဘို့ ခက်သွားပြီ။
ရှင်ဒေ၀ဒတ်ကြီးတို့လို အထက်တန်းကျတဲ့ ရဟန်းဘ၀ကို ရောက်လင့်ကစား
သူ့ကို ရဟန်းအဖွဲ့အစည်းထဲက မောင်းထုတ်ခဲ့ရတဲ့ အခြေအနေထိ ရောက်ခဲ့တယ်။
သူ့ကြောင့် သာသနာ အမဲစက်ထင်ခဲ့ရတယ်။
တကယ့်စိတ်ဓာတ်ရေးရာ အဆင့်အတန်းမြင့်မားတဲ့ ရှင်အာနန္ဒာကြီးတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးတွေရှိနေတော့ သာသနာ ဂုဏ်တက်ရပြန်ရော။
မြတ်စွာဘုရားစကားတော်ကို ကြာကြာဆောင်ထားနိုင်တဲ့ သတိအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်
မြတ်စွာဘုရားကို ဆည်းကပ်လုပ်ကျွေးတဲ့နေရာမှာ ၀ီရိယအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့
ရှင်အာနန္ဒာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခု ရှိသေးတယ်။
(Dr. K Sri Dhammananda ၏ VCD Dhamma talk တစ်ခုက
မနုဿ အဖွင့်ကို နားထောင်ရင်း စဉ်းစားကြည့်တာ)
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:01 AM
(in any religion, philosophy or science)
Then accept that truth
(without any prejudice).
ပိဋကတ်ဆိုတာကို နားလည်ကြည့်ခြင်း (၇)
အရပ်လေးမျက်နှာ ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်လိုက်ရင်
ဒီနိုင်ငံရောက်ခါစက ဒီတောင်ကုန်း တောင်တန်းလေးတွေကို ကြည့်ပြီး
သူ့ Email မှာ Attached File နဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံပို့လိုက်တယ်။
ဆီဒိုးနားဟိုတယ် ကျုံးဒေါင့်မှာ သွားပြီး ရိုက်ထားတာ၊
ကျုံးရေပြင်နဲ့ မန္တလေးတောင် နောက်ခံနဲ့ပုံ။
ဓာတ်ပုံကို အသေအချာ စူးစူးစိုက်စိုက်ကြည့်ဖြစ်တယ်။
နောက် စကားလုံးတွေ အလိုလိုထွက်လာတယ်။
“ဒီနိုင်ငံက တောင်ကုန်း တောင်တန်းတွေမှာ တစ်ခုခုလိုအပ်နေတယ် ဆိုတာ ဒါပဲ”
ဘုရားဒကာ အမည်ခံချင်လွန်းလို့ စေတီပုထိုးတည်လိုက်တာ
ပုဂံလိုဒေသမျိုးမှာဆို သစ်တောကို ပြုန်းရော၊
မြန်မာပြည်မှာ စေတီပုထိုးတွေ သိန်းပေါင်း ထောင်နဲ့သောင်းနဲ့ချီအကုန်အကျခံပြီး
အသစ်ဆောက်နေတာကို တွေ့ရင် အတော် ဘ၀င်မကျဖြစ်မိတယ်။
စေတီပုထိုးပေါတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စေတီပုထိုးထပ်တည်ဆောက်ဖို့ လိုသေးလို့လား။
ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ ကိုယ့်အမိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ
အဲ့အတွက်ကုန်ကျငွေတွေကို ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးတွေမှာ အသုံးချလိုက်မယ်ဆိုရင်
ဟိုတစ်နှစ်က မလေးရှားနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ နှစ်ငါးဆယ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်
အတက်အောက်လည်ပတ်တဲ့ဟာကြီး တစ်ခု တည်ဆောက်တယ်။
လူတွေ စီးနင်းလိုက်ပါသွားရတာ။ ဖြည်းဖြည်း ဖြည်းဖြည်း လည်ပတ်တာ။
အပေါ်ရောက်သွားရင် ကွာလာလမ်ပူမြို့ ရှုခင်းတွေကို ကြည့်လို့ရတယ်။
လန်ဒန်မှာလည်း အလားတူ တစ်ခုရှိတယ်။
London Eye လို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်။ လန်ဒန်ရှုခင်းကို ကြည့်ဘို့။
နိုင်ငံသားတွေရော နိုင်ငံခြားသားတွေပါ စီးနင်းလိုက်ပါနေတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။
ဒီမလေးရှားနိုင်ငံ အစိုးရလည်း UK အစိုးရကို အတုခိုးပြီး
လိုက်လုပ်တာဖြစ်မယ်။ နိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံတိုးတက်ဘို့ ဘက်စုံက ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ဘဏ္ဍာငွေရှာနေကြတာ။ အတော်အားကျဘို့ကောင်းတယ်။
နိုင်ငံတော်အတွက် လိုအပ်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေကို ရှာပေးနိုင်တဲ့
လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ ကွာလာလမ်ပူမှာရှိတဲ့ မြို့တော်ရှုခင်းကို တစ်နေရာတည်းကကြည့်လို့ရတဲ့
ရဟတ်ကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်တာ ပိုအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်မိတယ်။
စေတီပုထိုးရှိတဲ့ တောင်ကုန်း ရှုခင်းတွေနဲ့ ယဉ်ပါးလာတဲ့မျက်စိဟာ
ဒီနိုင်ငံက တောင်ကုန်း တောင်တန်းတွေမှာ
စေတီပုထိုးမတွေ့ရတော့ ရင်ထဲဟာမိတာ အမှန်ပဲ။
စေတီပုထိုးဆိုတော့ စေတီပုထိုးနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ရှင်အာနန္ဒာကြီးကို သတိရမိပြန်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားကို ကြည်ညိုတဲ့သူတွေ မြတ်စွာဘုရားကို ပူဇော်ဘို့ လှူဒါန်းဘို့
မြတ်စွာဘုရားကျောင်းမှာရှိနေရင်တော့ ပါလာတဲ့ပစ္စည်း လှူဒါန်းခဲ့ရုံပေါ့။
မြတ်စွာဘုရားမရှိတဲ့အခါ ပါလာတဲ့ပစ္စည်း ဘယ်ကို လှူဒါန်းခဲ့ရမှန်းမသိတော့ဘူး။
ဒီတော့ ကျောင်းဒကာ အနာထပိဏ်က ရှင်အာနန္ဒာကို
ဘုရားထံ လှူဒါန်းဘို့လာတဲ့သူတွေ ဘုရားမရှိလည်း လှူဒါန်းလို့ အဆင်ပြေအောင်
ရှင်အာနန္ဒာကလည်း ဒီကိစ္စကို မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့လျှောက်တယ်။
မြတ်စွာဘုရားက လှူဒါန်းပူဇော်သင့်တဲ့ အရာ သုံးမျိုးကို ပြောပြတယ်။
၁။ ဓာတ်တော်မွေတော်အပါအ၀င် မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်
၂။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အသုံးအဆောင်များ
၃။ မြတ်စွာဘုရားကို အာရုံယူဘို့ မြတ်စွာဘုရားကို ရည်ညွှန်းထားသော ရုပ်တု၊ စေတီ
ရှင်အာနန္ဒာက မြတ်စွာဘုရားသက်ရှိထင်ရှားရှိတုန်း စေတီပုထိုးတည်ထားကိုးကွယ်ရရင် အဆင်ပြေနိုင်မလားလို့ ဆက်လျှောက်တယ်။
စေတီကို ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးမှ ငါဘုရားရဲ့ အရိုးတော် ဓာတ်တော်တွေနဲ့
တည်ဆောက် ပူဇော်သင့်ကြောင်း၊ ဒီလို စေတီပုထိုးတော်တွေကို ပူဇော်တာဟာ ရုပ်ကို အခြေခံပြီး ပူဇော်တာမျိုး မဟုတ်ကြောင်း၊
စေတီပုထိုးတော်တွေကို ပူဇော်တာဟာ စိတ်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ကြောင်း ဆက်လက်မိန့်ကြားပါတယ်။
စေတီပုထိုးကို ကြည့်၊ ဘုရားအစစ်ကို (သက်ရှိထင်ရှားမြတ်ဘုရားကို)
စိတ်နဲ့အာရုံပြုပြီး ပူဇော်ရမှာလို့ နားလည်မိပါတယ်။
တနည်းအားဖြင့် ပုံနောက်က ဂုဏ်ကို စိတ်အာရုံရောက်အောင်ပြု၊ ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
စေတီပုထိုးမတည်သေးဘဲနဲ့ သူတရားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ ဗောဓိညောင်ပင်ကို စိုက်ပျိုးပြီး
သူမရှိတဲ့အခါ သူခရီးထွက်နေသခိုက် သူ့ကိုယ်စား ဗောဓိညောင်ပင်ကို ပူဇော်ဘို့
မြတ်စွာဘုရားက ရှင်အာနန္ဒာကို အကြံပြုပါတယ်။
ဒီနောက် ရှင်အာနန္ဒာဟာ ရှင်မောဂ္ဂလာန်ကြီး အကူအညီနဲ့
ဇေတ၀န်ကျောင်းနဲ့ မလှမ်းမကမ်းမှာ စိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဗောဓိညောင်ပင်ကို အာနန္ဒဗောဓိပင်လို့ အမည်တွင်စေခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ အိန္ဒိယကို ဘုရားဖူးသွားကြတဲ့သူတွေ
သီဟိုဠ် (သီရိလင်္ကာ) နိုင်ငံ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုင်းမှာ
ဗောဓိပင်ကို ဘုန်းကြီးကျောင်း အင်္ဂါရပ် (၁) ချက်အဖြစ် ထည့်သွင်းထားပါတယ်။
သီဟိုဠ်ဘုန်းကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်းတည်ထောင်ရင် ကျောင်းဝင်းထဲမှာ
၁၊ ဘုရားကျောင်းသီးသန့် (ဘုန်းကြီး၊ လူမနေရ၊ ဂန္ဓကုဋိကဲ့သို့)
၃၊ ဗောဓိညောင်ပင် တစ်ပင်
၄၊ သံဃာနေဆောင် တို့ရှိရပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ပေ ၄၀×၆၀ အကွက်ခလေးကို ဘုန်းကြီးကျောင်းမြေကွက်အဖြစ်ချပေးပြီး
စေတီပုထိုး မပြောနဲ့၊ ဗောဓိညောင်ပင်မပြောနဲ့၊
ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးကိုယ်တိုင်တောင် ခြေရဲရဲ မဆန့်ရဲလောက်တဲ့ ကျောင်းမှာ
နေနေကြရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ သာသနာ့ဝန်ထမ်းများဘ၀ကိုလည်း မြင်ယောင်နေမိတယ်။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 9:51 AM
တက္ကသိုလ်တွေဟာလည်း ဘွဲ့ရလုပ်သားတွေအစုလိုက် အပြုံလိုက်
ဂဏန်းတွက်စက်ပျက်သွားတာနဲ့ ဈေးမရောင်းတတ်တဲ့ အရောင်းဈေးသည်တွေ၊
သူများရေးထားတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းစာအုပ်မရှိရင် စာမသင်တတ်တော့တဲ့ ကျောင်းဆရာတွေ၊ ဘလူးပရင့်မရှိရင် ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာတွေ၊
အသင့်ဖော်စပ် ထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့ ဆေးဝါးတွေမရှိရင် လေချုပ်လေအောင့်ဖြစ်တဲ့
လူနာအတွက် လေဆေးလေးတောင် စပ်ပြီး ကုမပေးနိုင်တဲ့ ဆရာဝန်တွေပဲ များနေတယ်။ ကိုယ့်ဦးနှောက်နဲ့ကိုယ် စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့
ပညာတတ်တွေ ရှားပါးသထက် ရှားပါးလာနေတယ်။
အခုကျောင်းတွေက ထွက်လာတာတွေက စာတတ်သူတွေချည်းပဲ။
ပညာတတ်မပါဘူးလို့ ပြောကြဆိုကြတာတွေလည်း မကြာမကြာကြားရတယ်။
ပညာကိုတန်ဖိုးထားသူတိုင်းက ပညာရေးကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးများလို သဘောထားလုပ်ကိုင်နေကြတာကို မနှစ်မြို့ကြဘူး။
တက္ကသိုလ်ဆရာတွေက မော်တော်ကားရောင်းသမားလို ကမ္ဘာလှည့်ပြီး
ပညာရေးကို စီးပွားရေးရဲ့လက်အောက်ခံအဖြစ် သဘောထားလာကြတာကို
တော်တော်ကို စက်ဆုပ်ကြတယ်။ စက်ဆုပ်ပေမယ့်လည်း ဘာမှမတတ်နိုင်ကြဘူး။ နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းရဲ့ အစိုးရတွေ ကိုယ်တိုင်က ဘာမဆို 'ဈေးတွက်' တွက်ပြီး ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်သလို လုပ်နေကြတာဆိုတော့
ပညာကို ရှူးဖိနပ်ရောင်းသလို၊ ဟမ်ဘာဂါနဲ့ ကိုကာကိုလာရောင်းသလို
သဘောထားနေကြတော့ ပညာရဲ့တန်ဖိုးဟာတစ်နေ့တခြား ကျဆင်းလာခဲ့ရတယ်။
လူတွေဟာ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ထက်
ကွန်ပျူတာဆီက အဖြေထုတ်ယူဖို့လောက်သာ အားသန်ကြတယ်။
ဒါမှမဟုတ်လည်း စာအုပ်တွေထဲက သဘောတရားတွေနဲ့ ဖော်မြူလာတွေကိုပဲ အားကိုးကြတယ်။ လူ့ဦးနှောက်ဟာ ကွန်ပျူတာလောက်တောင် အသုံးမကျတော့သလိုဖြစ်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ကြာလာတော့ လူ့ဦးနှောက်နဲ့သတ်မှတ်တဲ့ လူ့တန်ဖိုးတွေနဲ့ လူသားစံနှုန်းတွေအားလုံးလိုလိုဟာ ယုတ်လျော့ကျဆင်းပြီး စံချိန်မမီဖြစ်ကုန်ကြတော့တယ်။
လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အိမ်ထောင်ဆိုတာပဲကြည့်။ ကမ္ဘာဦးအစက
ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ အုပ်စုလိုက်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ကြတယ်။
နောက်တော့ စိုက်ပျိုးစားသောက်လာတတ်ပြီး အခြေတကျရွာတည်နေလာကြတယ်။
အဲဒီတော့မှ လင်ရယ်၊ မယားရယ်လို့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်နဲ့ အိုးအိမ်တည်ဆောက်နေထိုင်တယ်။ အဲဒီအဆင့်ကို ယဉ်ကျေးလာတဲ့အဆင့်(Civilized)လို့သတ်မှတ်တယ်။
ဒါတောင် တစ်လင်တစ်မယားမဟုတ်သေးဘူး။ စစ်နိုင်လို့ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတဲ့ မိန်းမတွေကို ယောက်ျားတွေက မယားအဖြစ်ထားတဲ့အတွက် ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ မယားအများအပြားနေလာကြတယ်။ နောင်ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်မြင့်သထက်မြင့်လာမှ တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကို ဥပဒေတွေဘာတွေပြုပြီး ပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြတယ်။
ဟော အခုတော့ အိမ်ထောင်ဆိုတာ လူသားများရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ကန့်သတ်တဲ့အချုပ်အနှောင်လိုဖြစ်တယ်။ ခေတ်မမီတော့ဘူး။
ဘယ်သူ့ဘယ်သူမှ ချုပ်နှောင်မထားတဲ့ အတူနေချင်စိတ်ရှိတဲ့အခိုက် အတူနေ၊ နေချင်စိတ်မရှိတဲ့အခါ ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေဆိုတဲ့ အယူအဆကို လက်ခံကျင့်သုံးပြီး 'အဖော်'(Companion)လို့ ခေါ်ကြတဲ့ နေနည်းမျိုးနဲ့နေထိုင်ကြတာတွေ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာ တော်တော်လေးကျင့်သုံးနေကြတယ်။ ပြင်သစ်ကတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီး နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ယန်းပေါဆတ်နဲ့ ဆီမွန်ဒီဘူဗွားတို့ဆိုရင် လက်မထပ်ဘဲနဲ့ တစ်သက်လုံး (Life companion) ဆိုပြီးနေသွားကြတယ်။ တချို့ကတော့ အတူနေပြီး ကလေးတစ်ယောက် နှစ်ယောက်မွေးပြီးမှ လက်ထပ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်။ အိမ်ထောင်နဲ့ မိသားစုဆိုတဲ့ နှုန်းစံတွေ ပြောင်းလဲသွားပုံကိုပြောတာပါ။
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ၀တ်စားဆင်ယင်ပုံဆိုရင်လည်း စစ်မဖြစ်မီ ခေတ်ကဆိုရင်
ခြေမျက်စိဖုံးတဲ့ ဂါဝန်ရှည်ပွပွကြီးတွေကို အတွင်းက ရင်စည်းကျပ်ကျပ်ခံပြီး ၀တ်ကြတာပါ။ မိန်းကလေးရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ကိုလည်း အသက်နဲ့ထပ်တူ တန်ဖိုးထားကာကွယ် စောင့်ရှောက်ကြပါတယ်။ လက်မထပ်ရသေးဘဲ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးဆိုရင်ရွာကနေ နှင်ထုတ်တဲ့အထိတောင် ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချလေ့ရှိတယ်။
ဟော အခုခေတ်တော့ ၀တ်ပုံဆင်ပုံတွေ လျှပ်ပေါ်လော်လီကြပုံတွေများ ပြောတောင်မပြတတ်တော့အောင် ကမ်းကုန်နေကြပါပြီ။
အလယ်တန်းရွယ် ဆယ့်သုံးဆယ့် လေးနှစ်သမီးအချင်းချင်း အပျိုစင်အဖြစ်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် ကဲ့ရဲ့ကြသတဲ့။ လူမှုရေးပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေးညံ့ဖျင်းတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်ကြသတဲ့။ လူ့တန်ဖိုးတွေပြောင်းလဲသွားပုံကို ကြည့်ပါဦး။ ဆန့်ကျင်ဘက်သဘော ဖြစ်သွားတဲ့အထိကို ပြောင်းကုန်ကြတာ မဟုတ်လား။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 9:08 AM
It isavirtue,
A disposition for love,
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:50 AM
ပိဋကတ်ဆိုတာကို နားလည်ကြည့်ခြင်း (၆)
Posted by Dr. Ashin Indaka at 12:50 PM
Posted by Dr. Ashin Indaka at 7:54 AM
ပိဋကတ်ဆိုတာကို နားလည်ကြည့်ခြင်း (၅)
နံပါတ် (၅) အမိတောဒန ဆိုတာက
ဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ရှင်အာနန္ဒာ တို့က ညီအစ်ကို တစ်ဝမ်းကွဲ။
မြတ်စွာဘုရားနဲ့ ရှင်အာနန္ဒာတို့က သက်တူရွယ်တူတွေ။
မြတ်စွာဘုရား ဘုရားအဖြစ်ကို ရောက်ပြီး (၂) နှစ်မြောက်မှာ
ရှင်အာနန္ဒာ သာသနာဘောင်ဝင်ရောက်လာတယ်။ ဘုန်းကြီးဝတ်လာတယ်ပေါ့။
မြတ်စွာဘုရား ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတာက အသက် (၃၅) နှစ်အရွယ်ဆိုတော့
မြတ်စွာဘုရားအသက် (၃၆) နှစ်ဖြစ်တဲ့
ဘုရားဖြစ်ပြီး (၂) နှစ်မြောက်မှာ
သက်တူရွယ်တူ (ဖွားဖက်တော်) ရှင်အာနန္ဒာ
လူလည်း လူ့အလျှောက်၊ ဘုန်းကြီးလည်း ဘုန်းကြီးအလျှောက်
အသက်အရွယ်ရလာရင် အနီးကပ် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပြုစုလုပ်ကျွေးမဲ့သူ
သွားလိုတဲ့နေရာကို သွားပြီး ဟောလိုတဲ့တရားကို အေးအေးဆေးဆေးဟောကြားကာ
ရောက်တဲ့အရပ်က ဒကာ ဒကာမတွေ၊ ရဟန်းသံဃာတွေ ပြုစုလုပ်ကျွေးတာနဲ့ အဆင်ပြေနေတာပဲ။
မြတ်စွာဘုရားကို အနီးကပ် ပြုစုလုပ်ကျွေးတဲ့ ရဟန်းတော်အချို့ ရှိခဲ့ပါရဲ့။ ခဏပဲ။
ကြာလာတော့ မြတ်စွာဘုရား ပြောစကားနားမထောင်ဘူး။
အဲဒီအရပ်ကို မသွားပါနဲ့လို့ တားနေတဲ့ကြားက ထွက်သွားပြီး
ဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားကို အနီးကပ်အလုပ်အကျွေးပြုစုဘူးတဲ့ရဟန်းတော် ခပ်များများဟာ
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အထာကို မနပ်ကြဘူး။
သက်တော် (၅၅) နှစ် ၀ါတော် (၂၀) ရသည့်တိုင်အောင်
မြတ်စွာဘုရားမှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် အနီးကပ် အမြဲတမ်း ပြုစုလုပ်ကျွေးမဲ့သူ မရှိခဲ့ဘူး။
သက်တော် ၅၅ နှစ် ၀ါတော် (၂၀) အရွယ်ရောက်တော့
မြတ်စွာဘုရားက ရဟန်းတွေကို စုဝေးစေပြီး
ငါ့ကိုယ် အနီးကပ် အမြဲတမ်း ပြုစုစောင့်ရှောက်လုပ်ကျွေးနိုင်မဲ့ ရဟန်းတော်တစ်ပါးလိုအပ်တယ်။`
ငါ့ကို အမြဲတမ်း အနီးကပ် ပြုစုစောင့်ရှောက်လုပ်ကျွေးနိုင်မဲ့
ရဟန်းတစ်ပါးကို ရွေးချယ်ကြ -
ဒီတော့ ရှင်အာနန္ဒာ ကလွဲလို့
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ညာလက်ရုံး ဘယ်လက်ရုံးတွေဖြစ်ကြတဲ့
မြတ်စွာဘုရားရဲ့ Reject နဲ့ တိုးတော့တာပဲ။
နောက်ဆုံးတော့ သံဃာကြားထဲ ခေါင်းကြီးစိုက်ပြီး ငြိမ်နေတဲ့ ရှင်အာနန္ဒာကြီးကို
တိုက်တွန်းတော့ ရှင်အာနန္ဒာကြီး ဘာပြောတယ်ထင်တုန်း။
မြတ်စွာဘုရားရှင်အနေနဲ့ တပည့်တော်တောင်းဆိုတဲ့အချက် (၈) ချက်ကို လိုက်လျောပေးနိုင်မှသာ
ကြည့်စမ်း၊ သူများတွေ သူ့ထက်ငါ မြတ်စွာဘုရားကို
အလုပ်အကျွေးလုပ်ချင်လွန်းလို့ အလုအယက်လျှောက်နေတဲ့အချိန် ရှင်အာနန္ဒာကြီးကတော့ အေးဆေးပဲ။
အချက် (၈)ချက်တောင် မြတ်စွာဘုရားဘက်က လိုက်လျှောဘို့ တောင်းဆိုလိုက်သေးတယ်။
ရာထူးကြီးကြီးရထားထဲ့ အဲ့ဆွေမျိုးကို အမှီပြုပြီး
မြေ၊ အိမ်ယာ၊ တိုက်တာ၊ ဈေးခန်း၊ ကားစသည်များရအောင်
မြတ်စွာဘုရားဟာ ငါ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲပဲ၊ ဒီတစ်ချီတော့ ငါ့အကွက်ဆိုက်ပြီ၊ ငါ့ဆွေမျိုးကောင်းစားတုန်း ငါလဲ တစ်သက်တာဖူလုံအောင် ရိက္ခာရှာလိုက်မဟဲ့၊
ဖွားဘက်တော် နောင်တော်ဘုရားဆီက အခွင့်အရေးရတုန်း တောင်းလိုက်အုံးမဟဲ့ ဆိုတဲ့ အတ္တကိုယ်ကျိုးအတွက် ရှင်အာနန္ဒာကြီးက အဆိုပါ အချက် (၈) ချက်ကို တောင်းဆိုခဲ့တာလား။ မဟုတ်ပါဘူး။
သူတောင်းဆိုခဲ့တာ မြတ်စွာဘုရားအတွက်ပါ။ ရဟန်းသံဃာတော်တွေအတွက်ပါ။
ရှင်အာနန္ဒာ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ အလုပ်အကျွေးဖြစ်ဘို့အတွက် မြတ်စွာဘုရားထံက သူတောင်းဆိုတဲ့ အချက် (၈) ချက်ကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
၁။ မြတ်စွာဘုရား ရရှိလာတဲ့ သင်္ကန်းကို ဘယ်တော့မှ သူ့ကို မပေးရဘူးတဲ့။
၂။ မြတ်စွာဘုရားရဲ့ ဆွမ်းကို သူ့ကို ဘယ်တော့မှ မကျွေးပါနဲ့တဲ့။
၃။ မြတ်စွာဘုရားနေတဲ့ သန့်ရှင်းသပ်ယပ်တဲ့ ကျောင်းတော်အခန်းကို
ဘယ်လိုအကြောင်းပြချက်နဲ့မှ သူ့ကို မနေခိုင်းပါနဲ့ တဲ့။
၄။ မြတ်စွာဘုရားကို ဆွမ်းလှူဘို့ သင်္ကန်းလှူဘို့ စသဖြင့်
ပင့်တဲ့နေရာတွေကို သူ့ကို ဘယ်တော့မှ မခေါ်ပါနဲ့တဲ့။
၅။ သူ့ကို ပင့်တဲ့နေရာတွေကိုတော့ မြတ်စွာဘုရား အမြဲလိုက်ပါပေးရမယ်တဲ့။
၆။ ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ မြတ်စွာဘုရားကို ဖူးမျှော်ဘို့ လာကြတဲ့ဧည့်ပရိသတ်တွေကို
၇။ သူ့မှာ တစုံတရာ သံသယရှိလို့ မေးစရာရှိလာလျှင်
ဘယ်အချိန်မဆို မြတ်စွာဘုရားထံလာရောက် လျှောက်ထားခွင့်ပြုပါတဲ့။
၈။ မြတ်စွာဘုရားအနေနဲ့ သူ့မျက်ကွယ် ဘယ်မှာပဲ တရားဟောခဲ့ ဟောခဲ့၊
ရှင်အာနန္ဒာကြီးတောင်းဆိုတဲ့ ဒီအချက် (၈) ချက်ကို ကြည့်ပြီး
ရှင်အာနန္ဒာကြီးကို ကြည်ညိုလိုက်တာ။ အားကျလိုက်တာ။
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ၀မ်းသာ သဘောကျလွန်းလို့
ဒီအချက်တွေထဲက ပထမ (၃) ချက်ကို သေချာဖတ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
ဘ၀မှာ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ စားဝတ်နေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး
ရှင်အာနန္ဒာ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ မပတ်သက်ချင်ဘူး။
ဘုရားရဲ့ ပေးစာ ကမ်းစာ စားရ ၀တ်ရတဲ့ဘ၀မျိုး
ဘုရားပြုစုလုပ်ကျွေးပြီး ဘုရားပေးစာ ကမ်းစာစားပြီး ကြီးပွါးနေတာပါကွာ။
နံပါတ် (၄) တောင်းဆိုချက်ကို ကြည်။
လိုက်ကပ်စားသောက်နေတာဟေ့ လို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း မြင်လာနိုင်တယ်။
နံပါတ် (၅) တောင်းဆိုချက်ကြတော့
သူ့ကို သူ့ဒကာ ဒကာမတွေက ပင့်ရင်တော့ မြတ်စွာဘုရားပါ လိုက်ပေးရမယ်ဆိုပဲ။
ဘယ်လောက် ဆရာသမားကို ရှေ့တန်းတင်တဲ့ ရှင်အာနန္ဒာကြီးလဲ။
ရှင်အာနန္ဒာတောင်းတဲ့ ပထမအချက် (၅) ချက်ကို နားလည်မိတာပါ။
Cousin Brother ဖွားဖက်တော်ဖြစ်တဲ့ နောင်တော်ဘုရားဆီက
လုံးဝအခွင့်အရေးမယူတတ်တဲ့ ရှင်အာနန္ဒာကြီးကို ကြည့်ပြီး
Posted by Dr. Ashin Indaka at 7:21 PM
To be proud of what we have received
or to envy others for what they have
will rob us
of our peace of mind.
Posted by Dr. Ashin Indaka at 10:47 AM
ပိဋကတ်ဆိုတာကို နားလည်ကြည့်ခြင်း (၄)
he is able, is able.
ပိဋကတ်ဆိုတာကို နားလည်ကြည့်ခြင်း (၃)
မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ - ခု (ဘီစီ ၅၄၄) ကဆုန်လပြည့် အင်္ဂါနေ့
ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး ၃ - လအကြာ
Posted by Dr. Ashin Indaka at 5:02 PM
to the things you like,
do not cherish aversion
to the things you dislike.
come from one’s
Posted by Dr. Ashin Indaka at 3:29 PM
ပိဋကတ်ဆိုတာကို နားလည်ကြည့်ခြင်း (၂)
Posted by Dr. Ashin Indaka at 5:49 PM
Posted by Dr. Ashin Indaka at 9:27 AM
ပိဋကတ်ဆိုတာကို နားလည်ကြည့်ခြင်း (၁)
Posted by Dr. Ashin Indaka at 10:15 PM
ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံသို့ နိုင်ငံခြားသားတွေ အဆက်မပြတ်ရောက်လာနေကြတယ်
ရောက်လာရင် အများအားဖြင်. ရွှေတိဂုံဘုရား၊ ပုဂံဘုရားများ ၊မန္တလေးမဟာမြတ်မုနိဘုရားများ စစ်ကိုင်းဘုရားများကို လည်ပတ်းဖူမြော်ပြီး အဆင်သင်.ရင် တောင်ကြီးနဲ.အင်းလျားကန်သို. တစ်ရက်သွားလည်ပြီးပြန်ကြတာပဲ၊
မကြာသေးမီကချိန်က အင်္ဂလိပ်ပါမောက္ခနှစ်ယောက် အမေရိကန်ပါမောက္ခနှစ်ယောက် မြန်မာနိုင်ငံသို.ရောက်လာကြတယ်၊ ထုံးစံအတိုင်းဘုရားဖူးကြတဲ့အခါ အုတ်ပုံစေတီကို လူတို.က ပန်းပူဇော်တာ ဆီမီးပူဇော်တာရှိခိုးတာ ဘာအကျိုးကျေးဇူးရှိလဲလို့ တွေတဲ့လူကြီးတွေကိုမေးကြတယ်.... အင်္ဂလိပ်လိုမေးတယ်ဆိုတော့ မြန်မာဂေါပကလူကြီးတွေမဖြေနိုင်ကြဘူးးး
အဲ ၊ ဆုးလေဘုရားကို ပါမောက္ခအဖွဲ့ရောက်လာကြတယ်
ဂေါပကလြူကီးတွေက စေတီရင်ပြင်မှာ နေစဉ်တစ်နေကုန်
ဝေယျာဝစ္စလုပ်နေတဲ့ မစ္စတာဘဲလူးကို အခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်
မစ္စတာဘဲလူး က broken english တော်တော်ပြောနိုင်တာကိုး
Why do u worship this Pagoda?ဒီစေတီကိုသင်တိုးဘာကြောင်.ကိုးကွယ်တာလဲ..
This pagoda are made of bricks.ဒီစေတီဟာအုတ်နဲ.လုပ်ထားတယ်
Your houses are made of bricks.သင်တို.ရဲ.အိမ်များကိုလည်းအုတ်နဲ.လုပ်ထားတယ်
What is the different? ဘာခြားနားမှုရှိလဲ
အဲဒီအခါ မစ္စတာဘဲလူးက အမေရိကန်ပါမောက္ခကို ပြန်မေးတယ်။
Do u have wife, mister?ဆရာသင်မှာဇနီးမယားရှိလား
Do u have mother? သင်မှာ အမေကောရှိလား
Oh yes.အို ... ရှိပါတယ်.....
Do u have sister? သင်မှာညီမကောရှိလား..
Oh yes. အို ... ရှိပါတယ်.....
Now at night with whom do u sleep? ကဲ.. မိုးချုပ်တဲ့အခါသင်ဘယ်သူနဲ့အိပ်လဲ
Of course, I sleep with my wife ဟာကွာ...ငါဇနီးနဲ့အိပ်တာပေါ့
Why don't you sleep with your mother ? သင်အမေနဲ.ဘာကြောင်.အတူမအိပ်သလဲ......
Why don't you sleep with your sister? သင်နှမနဲ.ဘာကြောင်.အတူမအိပ်သလဲ...
Your mother is woman. သင်ရဲအမေဟာမိန်းမပဲ
Your sister is also woman.သင်ရဲ့နှမကလဲဟာမိန်းမပဲ..
And your wife is woman..ပြီးတော....သင့်ဇနီးကလဲမိန်းမပဲ....
What is the different? ဘာခြားနားမှူရှိလဲ....
အဲဒီ အခါအမေရိကန်ပါမောက္ခ မျက်လုံးမျက်ဆံ ပြူးပြီးပြောလိုက်တာယ်....
Oh boy , I get your point.ဟုတ်ပါပြီကွာ၊ မင်းဆိုလိုတာကို ငါနားလည်ပါပြီ...
မစ္စတာဘဲလူး နှာနှပ်ပေးလိုက်တော. အမေရိကန်ပါမောက္ခ
မေးခွန်းထပ်မမေးနိုင်ကြတော့ပဲ နှုတ်ပိတ်ပြီး ခေါင်းတညိတ်ညိတ်နဲ့ထွက်သွားကြတယ်
အခြားဘာသာ အယူရှိတဲ. နိုင်ငံခြားသားတို့ဟာ စေတီကို အုတ်ပုံလို မြင်နေကြတယ်
သစ္စာလေးပါး ကို မြင်သိတဲ. ဗုဒ္ဓ ဥာဏ်တော် ဖြစ်တာကို သူတို. မသိကြဘူးလေ ဒီဥာဏ်တော်တွေဟာ ထိပ်တန်း အကျဆုံး ဥာဏ်တော်များဖြစ်လို.
ဒါကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့လည်း ဗုဒ္ဓရဲ့သစ္စာလေးပါးကို မြင်သိတဲ့ဥာဏ်တော်များကို ကြည်ညို ဦး ခိုက်နိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်း။
ဒကာလေးတစ်ယောက်ပို့လိုက်တာကို အင်္ဂလိပ်လိုရော မြန်မာလိုမှာပါ
Posted by Dr. Ashin Indaka at 7:30 PM
be mindful of adversity.
be mindful of poverty.
be mindful of thoughtfulness.
be mindful of humility.
Posted by Dr. Ashin Indaka at 12:15 PM
စကားလုံး - ဥာဏ်တိမ်
အဓိပ္ပါယ် - ဥာဏ်မရှိခြင်း
ဥပမာ - မင်းတော်တော်ဥာဏ်တိမ်တဲ့ကောင်ပဲ
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်က ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးပြောတာ ကြားခဲ့ဘူးတယ်။
အဲ့စာတမ်းကို ပြင်ပပညာရှင်ဆရာတော်တွေကို ပြပြီး
သူတို့ရဲ့ ထောက်ခံမှု၊ အတည်ပြုမှု လက်မှတ်ကို ရယူရပါတယ်။ ။
သူငယ်ချင်းတစ်ပါး သူ့စာတမ်းကို ပြင်ပပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ တောင်ပြင် ဘုရားကြီးအနီး
မြင်းဝန်မင်းကြီးတိုက်က နာမည်ကြီးဆရာတော်ကို သွားပြတယ်။
ဆရာတော်ကို ဆရာတော်ဦးထွန်းတင် လို့ပဲ လူသိများတယ်။
သက်တော် (၇၀) ကျော်လောက်တော့ ရှိပြီ။
စာတမ်းသွားပြတဲ့ သူငယ်ချင်းနဲ့ ဆရာတော်ဦးထွန်းတင်တို့ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်းပြောရင်း
အဲ့အချိန်က တိုင်းသံဃနာယက ဥက္ကဋ္ဌလုပ်နေတဲ့ ဆရာတော်ကြီးအကြောင်းရောက်သွားတယ်။
အဲ့ကျမ်းစာကို ဆရာတော့်အနေနဲ့ ဘယ်လိုယူဆပါသလဲ လို့ သူငယ်ချင်းက မေးတော့
စကားလုံး - လန်ထွက်နေတယ်
အဓိပ္ပါယ်- အကောင်းစား ၊ အမိုက်စား..အမှန်အကန်လေး
ဥပမာ - ယောက်ဖ ငဂျောက်ရေ မင်းညီမကတော့ လန်ထွက်နေတယ်ကွာ။ ပိာပိာ
စကားလုံး - လန်းတယ်
ဥပမာ - ပော့ကောင် ငဂျောက် ငါ့ စတိုင်က လန်းသလောက် မင်းစတိုင်က ဂွမ်းလိုက်တာကွာ။ ငါနဲ့ဝေးဝေးကလျှောက်။
စကားလုံး - ဂျွတ်တယ် (dota ဂိမ်းဆော့သူတွေပြောတာပါ။)
အဓိပ္ပါယ်- ကောင်းသော
ဥပမာ - ဟေ့ကောင် မင်းအကောင်ကဂျွတ်တယ်ကွ ငါဘယ်လိုနိုင်တော့မလဲ။
ရေးသူ - ရန်ဗိုလ်
ကျွန်တော် ပြောသာပြောနေရတာ အဓိပ္ပယ်တကယ်မသိဘဲနဲ့ ပြောနေရတဲ့ စကားလုံးတစ်လုံးရှိတယ်ဗျ၊ သိသလိုလိုနဲ့ ဘာမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတာ အဲဒီစကားလုံးကို။ သိသူများ တစ်ချက်လောက်ရှင်းပြပေးကြပါ။
အဲဒီ စကားလုံးက တော့ "ကျွတ်ဆင်" ဆိုတာပါပဲ။
ကျွတ်ဆင်ဆိုတာ ဆင်ကြီးဘောင်းဘီကျွတ်တာနေမှာပေါ့ဗျာ.. ဟီးဟီ
စကားလုံး - ကျွတ်၊ ကျွတ်ကျဲ၊ ကျွတ်ဆင်
အဓိပ္ပါယ်- ကြောက်သည်၊ ကြောက်စရာကောင်းခြင်းကို ဆိုလိုသည်
ဥပမာ - အာ အဲ့ကောင်က ကျွတ်ဆင်ကြီး။ သိပ်ကျွတ်မနေပါနဲ့ကွာ။ မင်းမသိလို့ပါ ငါပေါက်ကွဲရင် သူကျွတ်ကျဲနေတာ။
ရေးသူ - မယ်တင်
တခြား အဓိပါယ်ရှိလဲ ရေးပေးပါ
စကားလုံး - ပူစီဘဲ
အဓိပ္ပါယ် - ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေသူ
ဥပမာ - ဒီကောင်ကတော့ ပူစီဘဲကွာ
ရေးသူ - berhad
ပူစီဆိုတာ နောက်တမျိုးရှိသေးတယ်ဗျာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀နှစ်လောက်ထဲကသုံးနေတဲ့ အသုံးနှန်းလေး တခုပါ။
မှတ်မှတ်ရရ ကျနော် ၈တန်းနှစ်မှာ အခန်းထဲက နှစ်ကျ အကိုကြီးတယောက် ပြောနေတာကို ကြားဖူးတာပါ။ လူငယ်တွေ တော်တော်များများလဲ သိကြပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ် - ပြစ်တဆာမ၊ --ာသည်မ
ဥပမာ - ဒီကလပ်က ပူစီများတယ် သိပ်မသန့်ဘူးကွ။
ရေးသူ - မျောက်ကျော်
စကားလုံး - ဘန်းကျော်
အဓိပ္ပါယ် - ဘန်းထားသမျှကို ကျော်ကျော်သွားနေရသည်
ဥပမာ - ဒီနေ့ ဘန်းကျော်က connection တော့ကွာ . ..
စကားလုံး = ချိုချောင်
အဓိပ္ပါယ် = ကလေးကအချိုကြိုက်တယ် ။ အချောင်ရတာလိုချင်တယ်။
ဥပမာ = မင်းကချိုချောင်ပဲကွာ။
စကားလုံး = ဂျဗလွတ်
အဓိပ္ပါယ် = အပေါ်ယံကဟန်သာရှိပြီး တကယ်တန်းအတွင်းစိတ်မှာ ဘာမှမရှိတဲ့သူ
ဥပမာ = ဒီဘဲကြီးက ဂျဗလွတ်ကြီးပါကွာ။
အဓိပ္ပါယ် ....Adult channel
ဥပမာ...ကိုဗိုင်းရပ်ကြီးသည် တစ်ညလုံး အဒေါ့ခြံထဲတွင် ရှိနေသည်။
အဓိပ္ပါယ်- မျောက်တောင်မူးလဲအောင် ကစားသောသူ (တင်စားခေါ်ဝေါ်ခြင်း)
ဥပမာ- ဒီကလေးကတော့ မျောက်မူးလဲလေး..ထိန်းလို့ကိုမရဘူး..
မုရင်း website က http://mmcybermedia.com တဲ့။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 8:15 AM
The Buddha & The Lotus
But like the lotus unstained by water,
Posted by Dr. Ashin Indaka at 9:41 AM
How are you? I am fine, Thanks စတာတွေသင်ပြီးတော့
သူ့နာမည်က ဦးစိန်ဝင်းတဲ့။ (လူထုစိန်ဝင်းမဟုတ်ပါ။)
သူက တခါတခါ You banana, Potato- head စသဖြင့်
ဘမ်းစကား Slang တွေ ထည့်ထည့်ပြောတယ်။
ဘာတွေ ပြောနေမှန်းကို မသိဘူး။
ဒီ ဘမ်းစကားတွေကိုလည်း သိထားရမယ်တဲ့။
အဲ့ကတည်းက အင်္ဂလိပ်ဘမ်းစကားတွေကို လေ့လာဖြစ်တယ်။
မနေ့က အားနေတာနဲ့ online မှာ ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်ရင်း
မြန်မာ ဘမ်းစကားလေးတွေကို သွားတွေ့တယ်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက အင်္ဂလိပ် ဘမ်းစကားတွေကို စိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့တဲ့သူ
အခု မြန်မာ ဘမ်းစကားတွေကို တစုတစည်းတည်း သွားတွေ့တော့
အငယ်တုန်းက ထခဲ့တဲ့ ပိုးက ပြန်ထလာတယ်။
တချို့မြန်မာဘမ်းစကားတွေက ရဟန်းတော်တစ်ပါးအနေနဲ့ တင်ပြဘို့ မသင့်တော်ပေမဲ့
ငယ်မူငယ်သွေး (တနည်းအားဖြင့်) ငယ်ပိုးက မနေနိုင်ဘူး။
မနေနိုင်လို့ ရဟန်းတော်ရဲ့ blog မှာ တင်လိုက်တယ်။
အဲ့ website မှာတော့ ဘမ်းစကားကို gawdi တဲ့။
စကားလုံး - ဂေါ်ဒိုင်
အဓိပါယ် - ၁။ ဘမ်းစကားရဲ့ ဘမ်းစကား၂။ ဂေါ်လီတွေပြောသောစကား
ဥပမာ - စော်လေးက ဂေါ်လီမလေးပဲ ဂေါ်ဒိုင်တွေကြီး လွှတ်ပြသွားတာ။
ရေးသူ - မျောက်မျောက်
စကားလုံး - ဖော
အဓိပါယ် - ၁။ ပေါက်ကရလျှောက်ပြောသည် ၂။ လိမ်ညာပြောဆိုတယ်
ဥပမာ - လာဖောမနေနဲ့ ဟရောင် ။
ဟိုကောင် စော်ကြီးကို သွားဖောလိုက်တာ ယုံသွားတယ် ဟရောင်ရေ
စကားလုံး - အချဉ်
အဓိပါယ် - ၁။ သူတပါးအား ယုံလွယ်သူ ၂။ ဖောသမျှ အကုန်ယုံသူ
ဥပမာ - အချဉ်လေးကွာ သနားပါတယ်။ အချဉ် တစ်ကောင်တွေ့လာတယ်ဟေ့
စကားလုံး - အကစ်လေး
အဓိပါယ် - ၁။ အမိုက်စားလေး၂။ အကောင်းစားလေး
ဥပမာ - စော်လေးက အကစ်လေးကွာ။
စကားလုံး - ဂွမ်းတယ်
အဓိပ္ပါယ်- ညံဖျင်းသော ၊ ဆိုးသော ၊ မကောင်းသော..
ဥပမာ - မင်းသီချင်းကလည်းကွာ ဂွမ်းလိုက်တာ.
စကားလုံး - ကဂျောင်
အဓိပ္ပါယ်- ညံဖျင်းသော ၊ ဆိုးသော ၊ မကောင်းသော၊ တောကျသော။ ပုံ တုံးသော ၊ ဘုကလန့်နိုင်သော ..
ဥပမာ - မင်းစော်ကလည်းကွာ ကဂျောင်ကြီး တိုက်ကော။
စကားလုံး - ပိန်းတယ်
အဓိပ္ပါယ်- ညဏ်ထိုင်သော. ညံသော.
ဥပမာ - မင်းကလည်းကွာ ပိန်းလိုက်တာ လွန်ရော။
စကားလုံး - ကမ်းတယ်
အဓိပ္ပါယ်- သဘောကျ၍ အရာရာကို ပေးကမ်းသည်။
ဥပမာ - ပော့ကောင် မင်းစော်လေးက မင်းကို ကမ်းလှချည်လားကွ...
စကားလုံး - ဥာဏ် တိမ်
အဓိပ္ပါယ် - ဥာဏ်မရှိ ခြင်း
ဥပမာ - မင်း တော် တော် ဥာဏ်တိမ် တဲ့ ကောင် ပဲ
သမထကမ္မဋ္ဌာန်းနှင့် ၀ိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်း မည်သို့ခြားနားသနည်း။ အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် တရားအားထုတ်၍ စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲ ရူးသည်မှာ မှန်ပါသလား။
သမထကမ္မဋ္ဌာန်းက ကာမစ္ဆန္ဒနီဝရဏအစရှိတဲ့ ကိလေသာများကို ငြိမ်းအေးစေပြီး ဈာန်အဘိညာဉ်ကို ရစေနိုင်ပါတယ်။ ၀ိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းက မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို ရစေနိုင်ပါတယ်။
နည်းနည်းချဲ့ပြောရလျှင် သမထကမ္မဋ္ဌာန်းဟာ ကသိုဏ်း ၁၀ ပါး၊ အသုဘ ၁၀ ပါး စသည်ဖြင့် (၄၀) ရှိပါတယ်။ အဲဒီ (၄၀) ထဲက တစ်မျိုးမျိုးကို ရှုပွါးအားထုတ်လို့ ပထမဈာန်ရလျှင် အဲဒီပထမဈာန်စိတ်က ထကြွသောင်းကျန်းနေတဲ့ နီဝရဏကိလေသာအပူဓာတ်တွေကို ငြိမ်သက်အေးမြစေပါတယ်။
ဒုတိယဈာန်စသည်ရတဲ့အခါကျတော့ ကိလေသာအပူဓာတ်ကို ငြိမ်းသတ်ဖို့ မလိုတော့တဲ့အတွက် ပထမဈာန်စသည်မှာပါတဲ့ ၀ိတက်၊ ၀ိစာရ၊ ပီတိအစရှိတဲ့ရုန့်ရင်းတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါတွေကို အဆင့်ဆင့် ပယ်သွားပါတယ်။ ဒီလို ပယ်တာကိုပဲ ငြိမ်းစေတတ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သမထငြိမ်းစေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောလေးက ထင်ရှားပေါ်လွင်ရုံမျှ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ရုပ်နာမ်နှစ်ရပ် ပေါင်းစပ်နေတဲ့ သ၀ိညာဏက အထည်ကိုဒြပ်ကို လူကောင်၊ နတ်ကောင်၊ ဗြဟ္မာကောင်၊ သတ္တ၀ါကောင် စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ယောက်ကျား၊ မိန်းမ၊ ဆင်၊ မြင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရုပ်ကလာပ်တွေ စုပေါင်းတွေ ခဲနေတဲ့အရာဝတ္ထုကို အိမ်၊ ကျောင်း၊ သစ်ပင်စသည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ နိစ္စ၊ သုခ၊ သုဘ၊ အတ္တစသည်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရိုးရာထင်မှတ်နေမှုမှ ထူးခြားပြီး ရုပ်ပဲ၊ နာမ်ပဲ၊ အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ၊ အသုဘပဲလို့ ရှုမှတ်ပွါးများမှုကို ၀ိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းလို့ ခေါ်ပါတယ်။ အဲသည် ၀ိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းအောင်မြင်ပေါက်မြောက်လျှင် မဂ်ဖိုလ်နိဗ္ဗာန်ကို ရပါတယ်။ အဲဒါ ထူးခြားချက်ပါပဲ။
တရားရိပ်သာတွေကို သွား တရားအားထုတ်ပြီး ဘ၀င်မြင့်သူ၊ စိတ်ကူးယဉ်သူ စိတ်ဂယောင်ချောက်ချားဖြစ်သူ တချို့ကို မြင်ရလို့ မေးတာနဲ့တူပါတယ်။ သည်လို စိတ်ကူးယဉ် စိတ်ချောက်ချား သွားတာကိုပဲ ရူးတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
သည်လိုဖြစ်တာဟာ တရားအားထုတ်စ သမာဓိမရသေးခင်မှာ စိတ်ဟာ ပင်မရှုကွက်အာရုံက လွတ်ထွက်သွားပြီး အခြားအာရုံတစ်ခုခုပေါ် ရောက်သွားတဲ့အခါ လွတ်ထွက်သွားပါလားလို့ သတိထားပြီး အဲဒီအာရုံကို မြင်လျှင် မြင်တယ်၊ ကြားလျှင် ကြားတယ်စသည်ဖြင့် မရှုမှတ်ဘဲ မြင်နေတဲ့အတိုင်း စိတ်ကို လွှတ်ထား ဆက်လက် စဉ်းစားတွေးတောနေတဲ့အခါ အဲသည် အာရုံတွေဟာ ပိုမိုထင်ရှားလာပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာ တစ္ဆေသရဲလို ထင်လာရာက တကယ်တွေ့ရသလိုဖြစ်ပြီး ထ အော်လို့အော်၊ ဘုရားရဟန္တာတွေ ဖူးရတယ် ထင်လာလို့ထင်လာ၊ ဘိုးဘိုးအောင်တို့ကို မြင်လို့မြင်၊ ကွယ်လွန်သွားတဲ့သူတွေနဲ့ တွေ့ရလို့တွေ့ရ၊ အဲသည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပဲ သူ့ကို စကားလာပြောတာကို ကြားလိုကြား စသည်ဖြင့် ထင်လာပြီး ဘ၀င်မြင့် စိတ်ကူးယဉ်နေတတ်တာလည်း ရှိပါတယ်။
မကြာမီ ရိပ်သာတစ်ခုမှာ တရားဝင်ပြီး အဲသည်လိုဖြစ်လာတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး သူ့မိဘများက ခေါ်လာ၊ ပရိတ်ကမ္မ၀ါရွတ်ဖတ်ပေးပါရန် ပြောဆိုသဖြင့် ရွတ်ဖတ်ပေးလိုက်ရပါသေးတယ်။ သူ့မိဘများကတော့ အနှောက်အယှက်ရှိတယ်လို့ ဆရာတစ်ယောက်က ပြောလိုက်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆရာဝန်ပြကြည့်တော့ဘ၀င်မြင့်နေတယ်ပြောပြီး စိတ်ငြိမ်ဆေးပေးလိုက်လို့ စားတာ သက်သာပါတယ် ပြောပါတယ်။
သည်လိုဖြစ်တာဟာ တရားအားထုတ်လို့ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တရားအားထုတ်စဉ် စိတ်ဟာ ပင်မရှုကွက်က လွတ်ထွက်သွားလျှင် လွတ်ထွက်သွားမှန်း သိအောင် သိထားပြီး ဘယ်လိုရှုရမယ် ဆိုတာ ကြိုတင်သိမထားလို့ ဖြစ်စေ၊ ကြိုတင်သတိထားစေကာမူ စိတ်လွတ်ထွက်သွားတာ မသိလို့ဖြစ်စေ၊ ဒီလို မလိုလားအပ်တဲ့ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်တာပါပဲ။ တချို့ တကယ့်ကို ရူးသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။
တရားအားထုတ်လျှင် မရူးရပါဘူး။ အရူးပျောက်ရမှာပါ။ ပဋာစာရီထေရီမဟာ တရားမနာရခင်မှာ ကိုယ်မှာ အ၀တ်မကပ်တဲ့အထိ သွက်သွက်လည် ရူးနေရာက ဘုရားရှင်နဲ့တွေ့ပြီး တရားနာရလို့ ရှုမှတ်လိုက်တာ တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ အရူးပျောက်ပြီး သောတာပန်မကြီး၊ နောက် ဧတဒဂ်ရ ရဟန္တမကြီး ဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်ပါလား။ ဒါကြောင့် တရားအားထုတ်လို့ ရူးတယ်ဆိုတာ မဟုတ်ဘူးလို့ မှတ်ပါ။
တရားအားထုတ်တဲ့နေရာမှာ ဆရာကောင်းကို အထူးလိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ပြောကြားလိုက်ပါရစေ။
Posted by Dr. Ashin Indaka at 9:22 AM